DAAWO: Shacab u Adkeysan Waayay Boobka Al Shabaab oo Qori Qaaty (VIDEO)
May 03, 2016 – Muumin Cilmi Jimcaale waa hor-joogaha dagaal-yahanno iskood isu abaabulay oo xoogaga Al-shabaab kala Wareegay Deegaanno dhowr ah oo Hoos-taga Degmooyinka Maxaas iyo Moqorkori ee gobolka Hiiraan.
Muumin Jimcaale ayaa sheegay inay dhibaato xoog leh kala kulmeen Al-shabaab oo dad badan ka laayay, dhinaca kalana bilaabay inay dhacaan xoolihii ay dhaqanayeen, taasoo keentay ayuu yiri in aan hubka qaataan.
“Dad badan ayeey Al-shabaab naga dileen, xoolaha intii abaarta ka badbaaday ayeey bilaabeen in ay naga qaataan, dhibaato joogta ayeey nagu hayeen, waxaan goosanay intaa kaddib in aan hubka qaadanno, taasoo keentay in aan ka saarno deegaanno dhowr ah iyadoo cid kale oo gacan nagu siisay aysan jirin,’’ ayuu yiri Muumin Cilmi Jimcaale.
Xoogagan is abaabulay oo la baxay [Macwiisley] ayaan helin taageeradii ay u baahnaayeen, hub iyo saanad militeri toona, waxaana gadiidka kaliya oo ay isticmaalaan marka uu Ruux ka dhaawacmo ku sheegeen uu yahay Awr ama Rati [Geelle kiisa Labka ah], taasoo mar marka qaar sababta in qofku dhinto ka hor inta aan la gaarsiin goob caafimaad.
Mid ka mid ah ragan waa 65 sano jir waxaa uu sheegay in Al-shabaab dileen wiil uu dhalay oo ahaa macalin dugsi Qur’aan, isaga oo intaa ku darray in wixii waqtigaa ka danbeeyay uu goostay in uu la dagaallamo Al-shabaab.
August 8, 2016 tuugahaladilo2015